Jurassic Survival 1.1.27 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 1.1.27 လြန္ခဲ့ေသာ 1 ပတ္က
ဂိမ္းမ်ား အက္ရွင္ Jurassic Survival
Jurassic Survival ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
သငျသညျဧရာမဒိုင်နိုဆောအပြည့်အဝလျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်ကျွန်းပေါ်တွင်ပစ်ပယ်ခံခဲ့ရသည်။ ငတ်မွတ်ခေါင်းပါးမှုနှင့်အအေး၏အသေခံ, သင်သည်လိုက်ရှာအရင်းအမြစ်များကိုစုဆောင်း, ယာဉ်အမှုအရာနှင့်တစ်ဦးအမိုးအကာတည်ဆောက်ရန်ရှိသည်။ သင်ကကျွန်းသားဆာလောင်မွတ်သိပ်ကုမ္ပဏီကြီးဒိုင်နိုဆောအကြားရှင်သန်ရန်သင့်ကိုအကောင်းဆုံးလုပ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ သူတို့ရှိအရာအားလုံးသည်အခြားကစားသမားများနှင့်အတူရေးအဖွဲ့တက်သို့မဟုတ်ယူပါ! သင်အလိုရှိသမျှကိုလုပ်ပါ, ဒါပေမယ့်သတိရ - အရေးကြီးဆုံးအရာရှင်သန်ရပ်တည်ရန်ဖြစ်ပါသည်။
သင်သည်မည်သည့်ဒိုင်နိုဆောယဉ်နိုင်ပါတယ်။ ၏သင်တန်းတစ်ခုကိုလုံခြုံမယ့်ကား diplodocus အပေါ်မှတ်တမ်းများတင်ဆောင်လာသောအများကြီးပိုလွယ်သည်။ ထိုအသင်တို့၏ရန်သူပေါ်မှာဖြည်ကြီးမားတဲ့ tyrannosaurus တစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့်အလွန်အမင်းစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ဖြစ်ပါတယ်။
လတ်ဆတ်သောအသား, အသီးနှင့်ရေ - ကျွန်း, ဤစာရေးရှိပါတယ်။ သင်ရုံဥစ္စာကို ယူ. စားရထားကြောင်းကိုရှောင်ကြဉ်ဖို့လိုပါတယ်။
> သငျ့အိမျအလုံခြုံဆုံး PLACE မှာဖြစ်ပါတယ်
တော်တော်လေးရိုးရှင်းတဲ့။ သင်သည်တတ်နိုင်သလောက်အဆောက်အဦးပစ္စည်းများစုဆောင်းနှင့်သင့်ပိတ်ဆီးနေသောခံတပ်ကိုတည်ဆောက်စေ။ အခြို့သောဒိုင်နိုဆောအလွယ်တကူသင့်ရဲ့ခြံစည်းရိုးကိုကျော် step နှင့်သင်သွားရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါလိမ့်မည်ဖြစ်သောကြောင့်သင်တို့မူကား, ခြံစည်းရိုးအမြင့်နှင့်အတူသတိထားပါရန်ရှိသည်။
> Craft - အောငျမွငျဖို့အဓိက
သင်တစ်ဦးချောင်းကိုနှင့်အတူအိမျမွှောလိုက်ဖမ်းကောင်းတစ်ဦးအချိန်ရှိသည်နိုင်ပါတယ်။ သို့သော်ထိုသို့ကွဲပြားခြားနားသောပစ္စည်းကိရိယာများအပေါ်ကောင်းတစ်ဦးလက်နက်နှင့်လက်နက်, စတော့ရှယ်ယာတက်ဖန်တီးနှငျ့အခြို့ကြီးတွေတိရိစ္ဆာန်အမဲကိုစတင်ရန်စမတ်ဖြစ်လိမ့်မည်။
ဒိုင်နိုဆောနှင့်ကစားသမားသငျသညျကိုဖြတ်ပြီးလာလိမ့်မယ်တစ်ခုတည်းသောသူများဖြစ်ကြ၏ထင်ကြသလော ထိုအခါက hidden ထောင်ထဲကတစ်ဦးကြည့်ပေးပါ ...
ဘုံရွာတည်ဆောက်ရန်အခြားကစားသမားတစ်ဦးတည်းသောမုဆိုး၏အခန်းကဏ္ဍကိုသင်တို့အဘို့မပါရှိလျှင်အဖွဲ့ကဖွင့်။ အများအပြား pluses ရှိပါတယ်: ကြီးမားတဲ့ဘုံအဆောက်အဦးကနေအန္တရာယ်အရှိဆုံးသောတိရစ္ဆာန်ကိုကြူးကျြောတကား!
ဤရွေ့ကားပဲယေဘုယျမှတ်ရှိပါတယ်, ဂိမ်းကမ္ဘာကြီးဘယ်လောက်နက်ရှိုင်းနှင့်ပိုပြီးစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ မင်းဘာစောင့်နေတာလဲ?
Jurassic Survival အတြက္ အသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
Jurassic Survival အေပၚ ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား
Jurassic Survival အေပၚတြင္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးမႈ မရွိပါ။ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္လိုက္ပါ!
Jurassic Survival အား အခ်က္ျပပါ
uiecx123 စတိုး33.42k
Jurassic Survival ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
APK အေၾကာင္း Jurassic Survival အခ်က္အလက္
APK ဗားရွင္း 1.1.27
ထုတ်လုပ်သူ Mishka Production
လက်မှတ် SHA1: 75:1D:24:7C:EF:0B:A0:F8:F6:5F:9D:3D:7A:71:2B:57:E7:1A:BA:9B
ထုတ်လုပ်သူ (CN): Andrey
အဖွဲ့အစည်း (O): Kefir
နယ်မြေ (L): Volgograd
ပြည်နယ်/မြို့တော် (ST): Volgograd
Jurassic Survival APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ